Kenya oo shaacisay waqtiga la bilaabayo darbi ay isaga xireyso Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo shaacisay waqtiga la bilaabayo darbi ay isaga xireyso Soomaaliya
22nd March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Kenya ayaa shaacisay in ay toddobaadka soo socda billaabayso dhimasha darbi ay ka dhisayso xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya, Joseph Nkaissery ayaa sheegay in darbiga ay ka dhisayaan dhammaan xuduudda ay la wadaagaan Soomaaliya, taasoo uu xusay inay qayb ka qaadan doonto sugidda amniga gudaha Kenya.
“Dhismaha darbigan waxaan billaabaynaa todobaadka soo socda, waxaana laga billaabayaa degmad Mandheera, si looga hortago kooxaha soohdinta ka soo gudba,” ayuu yiri Joseph Nkaissery.
Xildhibaanka aqalka sare ee laga soo doorto Mandheera, Bilow Keeroow ayaa taageeray qorshaha dhismaha darbigan, balse wuxuu shaaciyay inuu yahay qorshe KMG ah oo lagu adkeynayo amniga Kenya.
Maamulka Juba iyo AMISOM oo markale la wareegay Jaziiradda Kudhaa
Xuuthiyiinta oo qabsaday qeybo ka mid ah magaalada 3-aad ee dalka Yemen